वामदेव गौतमले राजीनामा दिनुको कारण के हो ? - Top Nepal News
वामदेव गौतमले राजीनामा दिनुको कारण के हो ?
काठमाडौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले शुक्रबार पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका हुन्। गौतमले स्वकीय सचिवमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन्। पार्टी उपाध्यक्ष र पार्टीका सबै जिम्मेवारी त्यागेको राजीनामापत्रमा गौतमले उल्लेख गरेको तामाङले जानकारी दिए।
[caption id="attachment_28839" align="alignnone" width="720"] ओलीमाथि के-के छन् गौतमका आरोप ?
गौतमले पनि बोली फेरेका छन् । उनले एकीकृत समाजवादीमा आउन शर्त अघि सारेका छन् । बिहीबार मात्र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका गौतमले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने, संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने लगायतका शर्त राखेका छन् ।[/caption]